Fil d'actualités du 20/01/2018
20/01/2018 - 23:30 : TOVOVAVIKELY TSY HITA: Tovovavy antsoina hoe Koloina Ramandimbisoa, monina eny Andohalo no tsy hita popoka nanomboka androany hariva.
20/01/2018 - 22:00 : ANOSIMASINA ITAOSY: Nitokona indray ny mponina io hariva io noho ny fahatapahan'ny jiro lava reny. Tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nanara-maso ny mety ho fihoaram-pefy.
20/01/2018 - 16:30 : SUPER COUPE DE MADAGASCAR: Lasan'ny CNAPS Sport ny amboara satria resiny tamin'ny isa 1-0 ny Fosa Juniors raha toa ka 0-0 tamin'ny lalao mandroso.
20/01/2018 - 14:30 : BAOLINA KITRA: Tonga miatrika ny "Super coupe de Madagascar" ny mpanazatra ny Barean'i Madagasikara Nicolas Dupuis.
20/01/2018 - 13:30 : HARRY LAURENT RAHAJASON: Nambarany androany fa olona mpiserasera sy mpikirakira ny tambajotran-tserasera Facebook an' ny Antoko TIM no namoaka ilay resaka milaza fa manapatra fahefana sy manao fanararaotana ara-nofo amin'ny mpiasan'ny minisitera ny tenany.
20/01/2018 - 12:30 : ANDRY RAJOELINA: Tsy manana olana amin'i Marc Ravalomanana aho, hoy izy raha nanontanian'ny gazety iray momba ny mety hiarahan'ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fifidianana.
20/01/2018 - 12:00 : FITSARANA AN'I MARC RAVALOMANANA: Tena marina ny filazan'ny filiha teo aloha fa fitsarana tsy mahefa no nitsarana azy, hoy ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala.
20/01/2018 - 11:30 : HAINO AMAN-JERIM-PANJAKANA: Nahazo "emetteurs" vaovao ny any Brickaville sy Vatomandry, ka efa miverina ny fahafahan'ny olona manaraka ny TVM sy RNM.
20/01/2018 - 11:00 : HERINARATRA: Tsy ho fantatry ny mponin'Antananarivo intsony izany delestazy izany satria efa 182Mwh izao no vakirin'ireo milina 3 eny Ambohimanambola, ka ny fahanteran'ny "transformateurs" na ny halatra tariby no mety hiteraka fahatapahana, hoy Rajaonarimampianina.
20/01/2018 - 10:30 : KAOMININA IVATO: Misokatra hatrany ny biraon'ny Fokontany rehetra anio Asabotsy 20 sy ny Alahady 21 Janoary sy ny 27,28 Janoary 2018 ary ny andavanandro mba ahafahan'ny tsirairay manamarina ny anarany anaty lisi-pifidianana.
Archive du 20180106
Rivodoza AVA,3000 no traboina Voa mafy i Toamasina sy Foulpointe
Loza amin’atambo no niainan’ny vahoakan’i Toamasina ny faritra Atsinanan’ny Nosy manontolo iny omaly noho ny fidiran’ny rivo-doza “Ava” an-tanety omaly tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany tao ao amin’ny distrikan’ny Toamasina (Ambalamanasy).
Fisondrotan-karama Nanantena tsy misy ny fonksionera
Samy niandry fatratra ilay fanambaran’ny filoha mba mety hampitsiky na ny mpanatrika ny lanonana teny Iavoloha omaly na ireo nanara-baovao tamin’ny haino aman-jery tany an-trano na tao am-piasana. Inona akory no teo fa tsy nisy filazana na dia fehezanteny iray aza momba ny fampisondrotan-karama.
Fifanarahana ara-politika Tsy eken-dRajaonarimampianina
Tsy fananan’ny mpanao politika irery ary tsy fananan’ny mpanao politika na iza na iza i Madagasikara, ka hanaovany izay tiany hatao, hoy i Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha omaly. Nambarany fa ampy izay ny fiheverana fa ny fanankorontanana ny firenena no vahaolana.
Didier Ratsiraka “Tsy ny fifidianana no mahamaika”
“Efa tsy nety hatrany am-piandohana io làlampanorenana io, ary tamin’ny taona 2010 no efa niteny aho hoe tsy mety io. Ataovy aloha ny fampihavanam-pirenena vao miroso amin’ny fifidianana, saingy tsy nisy nihaino, dia izao iarahantsika mahita izao”, hoy ny Filoham-pirenena Didier Ratsiraka nandritra ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona teny Iavoloha omaly. Efa nisy ny vaovao nivoaka momba ny haha kandinda filoham-pirenena azy amin’ity taona ity.
Raharaha Houcine Arfa Ho avy ny ampamoaka goavana
Tsy mbola nandrenesam-peo momba ilay teratany Frantsay tafatsoaka ny fonja ary voalaza fa efa any Paris Frantsa hatramin’izao na ny ministeran’ny fitsarana, na ny mpitandro filaminana misahana ny sisin-tany , na ny ministeran’ny raharaham-bahiny Malagasy.
Fanafihana tobin-dasantsy Polisy iray nidoboka eny Tsiafahy
Namoaka fanambarana ny avy amin’ny polisim-pirenena omaly noho ny asa ratsy nahasaringotra olon’izy ireo ireo. Manoloana ny tranga fanafihana tobin-dasantsy iray, ny alakamisy 04 janoary 2018 tokony ho tamin’ny 08 ora alina, ka nahavoarohirohy mpitandro ny filaminana iray izay am-perin’asa ety anivon’ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka Anosy.